हातमा टिक्दैन पैसा : तुरुन्त गर्नुहोस् यी उपाय ! - Sakaratmak Soch
हातमा टिक्दैन पैसा : तुरुन्त गर्नुहोस् यी उपाय !
धन सम्पतीको जोहो गर्न र यसको बचत गर्न अनेकौं प्रयासका बावजुद सफल भइरहनु भएको छैन ? वा तपाईको हातमा पैसा टिक्दैन ? यी अनेकौ समस्या भोगिरहनु भएको छ भने तपाईलाई लक्ष्मीको कृपा भएको छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।लक्ष्मी प्रसन्न भए वा दाहिना भएमा मानिसलाई कहिल्यै धनसम्पति, रुपैयाँ पैसाको अभाव हुँदैन । यस्तोमा देवि लक्ष्मीलाई प्रसन्न पार्ने केही उपायहरु जानकारी दिँदैछौ, जसले तपाईलाई सहज रुपमा लक्ष्मीको कृपा बर्षन सुरु हुन्छ ।
महिलाको आदर: बिभिन्न शास्त्र र मान्यता अनुसार जुन घरमा महिलाको आदर हुँदैन, उक्त घरमा लक्ष्मकिो कृपा हुँदैन । देवी लक्ष्मी ति घरमा मात्र प्रवेश गर्नुहुन्छ, जहाँ महिलाको सम्मान र आदर हुन्छ । तसर्थ घरमा भएका महिला आफन्तहरुलाई हमेशा आदर गर्नुहोस् । उनीहरु रिसाएका छन् भने तत्काल मनाउने वा प्रसन्न पार्ने प्रयाश गर्नुहोस् । अक्सर पति पत्नीबीच हुने मनमुटावका कारण पनि लक्ष्मीको कृपा हुँदैन ।
शुक्रवार ब्रत: शुक्रवारलाई भगवान् लक्ष्मीको दिनका रुपमा मानिन्छ । यस दिन लक्ष्मीको पूजाअर्चना वा उपासना गरे लक्ष्मी प्रसन्न हुने र मनोवाञ्छित फल दिने धार्मिक विश्वास छ । शुक्रवारका दिन बिहान सबेरै उठेर नुहाईधुवाई गरी पवित्र मनले माता लक्ष्मीको पूजा गरी श्रद्धापूर्वक प्रसाद वा भोग चढाएमा लक्ष्मीको कृपा बर्षन शुरु हुन्छ ।
वास्तु दोष: यदि घरमा कुनै वास्तुदोष छ भने पनि उक्त घरमा लक्ष्मीको कृपा हुँदैन । यस्तोमा वास्तुदोष भएका घरमा आएको धन पनि नासिएर वा खर्च भएर जाने हुन्छ । वास्तुशास्त्रमा घरको दिशा कस्तो हुनुपर्छ भनि मार्गदर्शन गरीएको छ । जसमा घरका कोठा, भान्सा, शौचालय लगायतका कोठा कुन दिशामा हुनुपर्छ जनाइएको हुन्छ । तसर्थ वास्तु नियम पालन गरी घर निर्माण गरेमा वा निर्माण सम्पन्न भएको घरमा पनि वास्तुको पालना गरेमा लक्ष्मी प्रसन्न भई सुख, संपन्नता र ऐश्वर्य प्राप्ती हुन्छ ।
कुंडलीमा शुक्र: जो ब्यक्तिको कुण्डलीमा शुक्र ग्रहको स्थिति मजबूत घरमा हुन्छ उनै ब्यक्ति प्रति माता लक्ष्मीको कृपा हुने गर्दछ । ज्योतिषशास्त्रमा शुक्र ग्रहलाई सुख/समृद्धिका रुपमा मानिन्छ । शुक्र ग्रह कमजोर हुने ब्यक्तिलाई घरमा आर्थिक समस्या परीरहने हुन्छ । यदि यस्तो भएमा मयुरको प्वाखँ घरमा राखेमा शुक्र मजबूत हुन जान्छ र लक्ष्मीको कृपा बर्षन थाल्छ ।
यसैगरी वस्तु शास्त्रमा ,आफूले मेहेनत गरेर कमाएको पैसा घरमा कस्तो ठाउँमा राख्दा उत्तम हुन्छ भन्ने कुरालाई महत्वका साथ बताइएको छ । घरको कुन दिशामा पैसा राख्दा लक्ष्मीले संधैब वास गर्छिन भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यदि तपाई आफ्नो कमाईबाट आर्जित धनको राम्रो संचय गर्न चाहनुहुन्छ भने वस्तुशास्त्रमा बताइएका यी कुराहरुमा राम्रो ध्यान दिनुहोला । वस्तु शास्त्रका अनुसार घरको यी दिशामा आफूले कमाएको पैसा राख्दा राम्रो संचय हुने र दैनिक थप्दै जाँदा धेरै बचत हुनेछ ।
यसमा शास्त्र उल्लेख गरे अनुरुप आफूले कमाएको पैसा राख्दा फजुल खर्च समेत नियन्त्रण हुदैं जानेछ र कुनै पनि परिवार वा व्यक्तिले धेरै धन आर्जन गर्न सक्नेछन् ।पूर्व दिशा:यदि तपाईहरु आफूले प्राप्त गरेको पैसा कुनै दराज वा अन्य लकरमा राख्नुहुन्छ भने ती चिजहरुलाई घरको पूर्वी दिशामा राख्नु फलदायी हुनेछ । यसरी संचय गरिएको पैसा निश्चित रुपमा वृद्धि हुँदै जाने छ । तपाईहरुले घरको पश्चिम दिशामा आफ्ना गरगहना अर्थात् बहुमुल्य वस्तुहरु राख्दा उत्तम हुनेछ ।
उत्तर दिशा: यदि तपाईहरुले आफूले पैसा ,गरगहना वा अन्य बहुमुल्य वस्तु राखेको दराज उत्तर दिशमा खुल्नेगरि राख्नु उत्तम हुनेछ । यसरि राखिएको यी चिजहरु कहीँले नघट्ने र समय बित्दै जाँदा बढ्दै जाने मान्यता रहेको छ ।दक्षिण दिशा:यदि तपाईले पैसा सहित आफ्ना बहुमुल्य वस्तुहरु दक्षिण दिशमा राख्नु भएमा कुनै नोक्सान नहुने तर वृद्धि भने कुनै मात्रामा नहुने कुरा वस्तु शास्त्रमा बताइएको छ । त्यसैले दक्षिण दिशामा यी चिजहरु राख्नु उत्तम मानिदैन।
लकर: कुनै पनि समान राख्दा यसको प्रकृति अनुसार राख्ने गरिन्छ । यसरी तपाई कुनै अमुल्य चिजहरु लकरमा राख्नुहुन्छ भने उक्त लकर भित्र लक्ष्मी को तस्बिर राख्नुहोला । धनकि देवी मनिएकी लक्ष्मीको तस्बिर लकरमा राख्दा ठुलो फलदायी हुने र धन वृद्धिमा सहयोग पुग्ने मान्यता रहेको छ ।दक्षिण पूर्वी दिशा:यदि तपाईको घरमा धन सँग सम्बन्ध रहेका केही बहुमूल्य वस्तु छन् भने त्यस्ता वस्तुहरु आफू प्राय बस्ने गरेको ठाउँ बाट दक्षिण पूर्वी दिशमा राख्नुहोस जसले तपाईको जीवनलाई ठुलो लाभ पुर्याउने छ ।त्यसको २ वर्ष अगाडि पनि महाप्रलयमा श्रीकेदारनाथ मन्दिर पनि सुरक्षित रहेको थियो।